Stefan Löfven oo dowlad cusub soo dhisaya iyo cabsi laga qabo doorasho cusub | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven ayaa maanta fursad loo siiyay in uu soo dhiso dowlad cusub. Ka markii ay shalay dhamaan madaxda xisbiyada Sweden ay la kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka Per Westeberg ayuu maanta ku wargaliyay Löfven in uu dhiso dowlad cusub.
Löfven ayaa hada laga sugayaa in uu soo magacaabo wasiirada cusub iyo in uu soo bandhigo miisaaniyada cusub balse arintaas ayaa noqon doonta mid aad loogu loolamo, iyadoo shalay uu gudoomiyaha xisbiga SD Jimmie Åkesson ku hanjabay in uu afka ciida u dari doono miisaaniyada Löfven haddii usan isaga la hadlin. Åkesson ayaa doonaya in la aqoonsado oo xisbigiisa lala shaqeeyo. Waxa kale oo uu doonayaa in ay helaan kursiga ku xigeenka afhayeenka baarlamaanka maadaama ay hada yihiin xisbiga sadexaad ee ugu weyn wadanka.
Löfven ayaa sidoo kale ku hungoobay rajadii uu ka qabay in u wada shaqayn la galo xisbiga Centerpartiet (C) oo shalay ay gudoomiyaha xisbgiaas Annie Lööf si cad u sheegtay in hadalka Löfven uu yahay mid lagu qoslo isla markaana aysan la fariisan doonin. Waxay intaas ku dartay in xisbigeeda iyo xisbiyada kale ee Alliansen ay soo bandhigi doonaan miisaaniyad u gooni ah.
Arintaas ayaa dhibaato u keeni karta Stefan Löfven haddii xulufada Alliansen iyo SD ay si wada jir ah u codeeyaan, taas ayaa durbadiiba keeni doonta in dowladiisa afka ciida loo daro oo wadanka lagu celiyo doorasho cusub. Taasoo waxyeelo u keeni doonta dhaqaalaha wadanka.